Kabary: hotohizana ny fiofanana tselatra - ewa.mg
Kabary: hotohizana ny fiofanana tselatra
News - Kabary: hotohizana ny fiofanana tselatra
Anisan’ny hetsika fanaon’ny
Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany ny fanatanterahana ny
fiofanana tselatra. Maro ireo handaha-teny na hikabary ao anatina
lanonana na fivoriana, sns, kanefa sahirana noho ny antony
samihafa. Ao ihany koa ireo tsy manam-potoana hanarahana
fampianarana mandritra ny fotoana maharitra. Ny ankamaroan’ireny
olona ireny anefa, liana hatrany sy te hanome lanja aman-kasina ny
Ireo tafiditra amin’ireo tranga
ireo no nambaran’ny tompon’andraikitra fa homena ny fiofanana
tselatra. Hiompana amin’ny lanonam-panambadiana ny fanohizana ny
fandaharam-potoana rahampitso sy ny 11 septambra izao. Lohahevitra
telo ny hianarana: “Teny fisaorana any am-piangonana”, “Kabary
fanokafana lanonana” ary ny “Kabary fisaorana amina lanonana”.
Satria, sahirana amin’ny fotoana ireo mpiofana, amin’ny 6 ora
maraina sy amin’ny 12 ora antoandro ary amin’ny 5 ora hariva ny
fiofanana. Mpampiofana telo avy hatrany rahateo no hitarika
fa manomboka mahasarika mpiofana ity fomba iray ampiasain’ny
Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany ity noho izy
mifanaraka amin’ny fandaminam-potoana ho an’ireo miasa ivelan’ny
tokantrano ka mila mamonjy ny ora fidirana.
L’article Kabary: hotohizana ny fiofanana tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Misaona ny mpisolovava : nodimandry ny Me Ratrimoarivony Yves
Banga ny tontolon’ny ho­lafitry ny mpisolovava sy ny fitsarana. Nodimandry, ny faran’ny herinandro teo, ny 17 jolay, ny Me Ratrimoa­ri­vony Yves. Efa filohan’ny holafitry ny mpisolovava ny tenany teo anelanelan’ny tao­na 1991 hatramin’ny 1993. Nampianatra sy nizara ny trai­kefany sy ny fahiaza-manao amin’ireo mpisolovava aty aoriana ihany koa izy. Anisan’izany ny Me Razafi­manantsoa Hanitra, sady so­lombavambahoaka am-perinasa amin’izao fotoana izao. «Zoky nampita fahaizana sy fomba fiasa amin’ny asan’ny mpisolovava izy. Tsy ho hadinonay mandrakizay iza­ny. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany, indrindra ny Me Solo sy i Mian­dra», hoy ity depioten’i Ma­dagasikara voafidy tetsy amin’ny boriborintany I ity. Etsy andaniny, mpikambana eo anivon’ny filankevi-pitantanan’ny fiarahamonim-pirenena ONG Ilontsera ny tenany, izao nodimandry izao.Synèse R.L’article Misaona ny mpisolovava : nodimandry ny Me Ratrimoarivony Yves a été récupéré chez Newsmada.
Fitazonana ny CEPE sy fanovana ny tetiandrom-pampianarana: tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny fiarahamonim-pirenena
Amin’ny ankizy 100 miditra eo anivon’ny ambaratonga voalohany, 32 monja no nahazo Cepe ary tafiditra kilasy T6. Vahaolana naroso ny teti-pivoarana hampiharina hatramin’ny taona 2021, izay tojo fanakianana sahady avy amin’ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Nampiaka-peo koa ny fiarahamonim-pirenena, omaly. Nanao fanambarana ny fiarahamonim-pirenena, omaly teny Ambatonakanga manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondrana hamerina ny tetiandrom-pampianarana amin’ny teo aloha (oktobra-jolay) ary hitazona ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana Cepe. Ny fiverenana amin’ireo teboka roa ireo dia manambara fa aato ny fampiharana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana natomboka, ny taom-pianarana 2017-2018, hoy ny fiombonan’ny fiarahamonim-pirenena Rindran’ny olom-pirenena hiarovana ny iaraha-manana (Rohy). Tsy ho azo irosoana koa ilay fampiasana ny tenin-dreny (malagasy) ho teny enti-mampianatra ho an’ny telo taona voalohany izay voaporofo ara-tsiantifika fa mahomby indrindra hanombohana fianarana, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny vaomiera sosialy ao amin’ny Rohy, Randriarimalala Erico. Ny fitazoanana ny fanadinana Cepe izay tokony ho nifarana tamin’ity taom-pianarana ity dia tsy mampandroso ny fanitarana ny ambaratonga fototra ho sivy taona. Betsaka ny ray aman-dreny mampiato ny zanany amin’ny fianarana raha vao mahazo ny mari-pahaizana Cepe fotsiny. Eo ny olana amin’ny vola sy ny fahalaviran’ny CEG any ambanivohitra indrindra, voatery mifindra toerana ilay zaza hanohy amin’ny kilasy 6ème. Tsy manan-danja anefa ho an’ny tontolon’ny asa ny Cepe raha manana lentany kosa ny BEPC ho an’ny asam-panjakana.Hevitry ny ray aman-dreny an-tanàn-dehibe Mifanohitra amin’ny tombontsoan’ny zaza maro anisa ny fihemorana tsy hanatanterahana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana, indrindra ireo monina any ambanivohitra. Nanapa-kevitra irery ny fitondrana ary fanadihadiana natao tamin’ny ray aman-dreny sy mpisehatra monina amin’ny tanàn-dehibe anatin’ny faritra fito no nitarika ny famoahana fanambarana fa hiverin-dalana ny fanabeazana. Tsy mankasitraka izany ny fiarahamonim-pirenena izay nanao sonia tamin’ny fametrahana ny PSE ary hanao ady sisika hanazavana amin’ny olom-pirenena fa ilaina sy mahoby ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana hampandrosoana ny firenena.Tokony hisy ny dinika iarahan’ny minisitera sy ny ray aman-dreny ary ny mpisehatra rehetra momba ny fampiharana ny PSE.Vonjy A. L’article Fitazonana ny CEPE sy fanovana ny tetiandrom-pampianarana: tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny fiarahamonim-pirenena a été récupéré chez Newsmada.
Fahamaizan’ny Bazarikely :: Nofotorana ny polisy kaominaly roa
Nanokafana fanadihadiana ny tranga fahamaizan’ny Bazarikely, tany Toamasina tamin’ny harivan’ny sabotsy lasa teo. Nofotorana teny amin’ny polisy mpanao fanadihadiana lalina ny polisy kaominaly roa anisan’ireo misahana ny fiambenana ny tsena. Mpivarotra vitsivitsy tamin’ireo niharam-boina ihany koa no efa nohenoin’ ny mpitandro filaminana. «Noho izy ireo niandraikitra tamin’ny fiambenana ny tsena tamin’io sabotsy nisehoan’ny loza io no antony nakàna am-bavany azy roa lahy polisy kaominaly ireo. Tokony ho nahita ny fiantombohan’ny afo voalohany izy ireo», hoy ny mpitandro filaminana. Tsy voatery hisy fisamborana olona tamin’ity hain- trano goavana niseho tao amin’ny Bazarikely Toamasina ity, araka ny fanampim-panazavana. «Hofantarina ny antony nahatonga ny firehetana ho fisorohana ny loza tahaka izao. Izany no mahatonga ny fanadihadiana. Antony efatra no voarainay mety ho nipoiran’ny afo: fifampikasohan’ny herinaratra na afo niniana natao na ihany koa afon-dabozia», hoy ihany ny polisy any Toamasina. L’article Fahamaizan’ny Bazarikely :: Nofotorana ny polisy kaominaly roa est apparu en premier sur AoRaha.
Minisitra Tinoka Roberto: raharaham-pirenena manan-danja ny fanatanjahantena
Saika hahitana an’Andriamatoa Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto,avokoa ny “site” rehetra hahitana ny fandraisana anjaran’ny atleta malagasy. Omaly, nanatrika ny lalao famaranana, ny taranja atletisma, izy sy ireo mpiara-miasa aminy, nahitana ny Tale Jeneralin’ny Spaoro, Rakotozafy Rosa. “Diso ny filazan’ny sasany fa variana aty amin’ny lalaon’ny Nosy ny tenako, zaza malagasy ireo miatrika fifaninanana ireo ary tena miaro ny voninahi-pirenena ka tsy maintsy omena fankaherezana, amin’ny alalan’ny fahitan’ireo atleta ny fanohanana mivantana toy izao, no hahafahan’izy ireo mahazo fandresena”, araka ny nambaran’Andriamatoa Minisitra.Tetsy ankilany, naneho ny heviny mahakasika ireto atleta malagasy ireto ny Minisitra Tinoka Roberto, efa manomboka miaina, hoy izy, ny fanatajahantena malagasy. hita taratra amin’ny ezaka ataon’ny atletantsika izany. Misy ireo taranja tena hahazoantsika vahana, toy ny fibatana fonjamby sy ny ataletisma. Medaly volamena maro no azontsika tamin’izany ka nampiakatra ambony ny lentan’ny Malagasy. Miarintsoa.RazL’article Minisitra Tinoka Roberto: raharaham-pirenena manan-danja ny fanatanjahantena a été récupéré chez Newsmada.
Ceni: “Miankina amin’ny fitsarana ireo kandidà voafonja”
“Tsy mitarika avy hatrany ny tsy maintsy hamoahana azy ireo any am-ponja ny fahalaniany ho solombavambahoaka. Mitohy hatrany ny raharaham-pitsarana mahazo azy ireo. Tsy misy afa-tsy ny didim-pitsarana avy any amin’ny fitsarana mahefa misahana ny raharahan’izy ireo ihany no afa-mamoaka azy ireo any am-ponja.”Io ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, afakomaly, momba ireo kandidà solombavambahoaka efatra any am-ponja. Amin’ny famoahana ny voka-pifidianana, ny anaran’izy ireo no hotononina fa voafidy ho solombavambahoaka.Mila manao fangatahana ny filohan’ny Antenimierampirenena Anjaran’izay ho filohan’ny Antenimierampirenena vaovao ny mangataka any amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny fahitana fototra ny fahabangan-toeran’ny solombavambahoaka, raha tsy mivoaka any am-ponja. Ny HCC no mamoaka ny fanapahan-keviny ny amin’izany.Raha ambaran’ny HCC fa banga ny toeran’ilay solombavambahoaka ao amin’ny Antenimierampirenena, hambarany amin’ny fanapahany hoe miakatra ny lisitra faharoa amin’ny toerana mifidy solombavambahoaka roa na ny mpisolo toerana amin’izay mifidy solombavambahoaka iray.Raha tsy misy afa-misolo azy intsony ao anatin’ny lisitra natolotra na ny mpisolo toerana, averina amin’ny ampahany na ny eo anivon’ny distrika ny fifidianana: 120 andro aorian’ny famoahan’ny HCC ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana tsy misy misolo toerana.Nifarana ny famoahana ny fironan’ny voka-pifidiananaNifarana afakomaly ny fikirakirana ny fitananna an-tsoratra (PV) nalain-tsary avy amin’ny distrika tsirairay avy. Nifarana omaly koa ny fanomezana ny fironan’ny voka-pifidianana amin’izany. Nanomboka kosa ny fikirakirana ny voka-pifidianana miainga amin’ny PV an-taratasy avy any amin’ny SRMV tsirairay avy.Jerena amin’izany ny maha ara-dalàna azy fa tsy dika na izay nampiasaina tamin’ny fanofanana. Amarinina koa ny sonia sy ny antontanisa ao amin’ilay PV amin’ny alalan’ny fampitahana. Izay vao havoaka ny voka-pifidianana vonjimaika amin’ny 15 jona.40, 55 % ny taham-pandraisana anjara tamin’ny fifidianana. Tao amin’ny boriborintany IV no ambany indrindra: 18, 45%. Sivy ny PV nilaza fa tsy nisy ny fifidianana: roa avy ny tao Ambanja, ny Ambilobe; iray avy ny tao Ankadikely Ilafy, ny tao Ifanadiana, ny tao Maintirano, ny tao Mampikony, ny tao Ambovombe Androy.R.Nd.L’article Ceni: “Miankina amin’ny fitsarana ireo kandidà voafonja” a été récupéré chez Newsmada.
Fiverenana tsikelikely :: Hanomboka hisokatra tanteraka ny AFT Andavamamba
Hiverina amin’ny laoniny ao anatin’ny fanajana ny fepetra fiarovana amin’ny valanaretina rehetra ny fampianarana ireo sehatra kanto rehetra sy fanolorana lanonana eny amin’ny AFT Andavamamba, amin’ny volana oktobra ho avy izao. Efa niverina talohan’ io ny fampianarana teny frantsay sy ny vaky boky. Ny kabary sy ny vata maroafitsoka no hisantatra an’izany, amin’ny 3 oktobra ho avy izao. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Misandrahaka amin’ny kolontsaina marolafy ny AFT Andavamamba. Santatra fotsiny ihany noho izany ny fampianarana kabary sy ny vata maroafitsoka, fa ho avy manaraka ao ihany koa ny fampianarana “infographie”, manomboka amin’ny 28 oktobra. Hisy ihany koa ny fampianarana amin’ny hariva eo amin’ny vata maroafitsoka, izay natokana ho an’ireo mbola manana adidy sahanina amin’ny tontolo andro. Hanomboka amin’ny 5 oktobra izy io. Tsy maintsy miditra mpikambana ao amin’ny AFT Andavamamba moa ireo rehetra te-hisitraka ny fampianarana samihafa. L’article Fiverenana tsikelikely :: Hanomboka hisokatra tanteraka ny AFT Andavamamba est apparu en premier sur AoRaha.
Teo am-panamarinana ny isam-bola nalefany no tsikaritry ny tompona kioska (cash point) fa hay vola sandoka ireo roa hetsy ariary nalefan’ity lehilahy iray ity. Voasambotra tetsy Anosy, omaly, izy io rehefa nifanenjehana ka natolotra ny polisy. Mbola nahitana odigasy sy bala 9 mm koa tao anatin’ny moto nentiny.Tsy afa-bela! Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny compagnie urbaine d’intervention, omaly tamin’ny 9 ora sy 30 mn teo amin’ny HJRA Anosy, ny lehilahy iray 31 taona nahatrarana vola sandoka. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisy, tonga tamina kioska (cash point) fandefasana vola ity lehilahy ity ka nandefa vola 2 hetsy Ar nataony tao anaty valopy fotsy iray. Rehefa lasa ny vola, nanamarina ny isam-bola ny tompon’ilay “cash point” ka tamin’izany no nahitany fa sandoka avokoa ny vola nomen’ity lehilahy nandrotsaka vola ity. Niantso ity lehilahy ity avy hatrany ilay tompona kioska ka nodiany tsy fantatra fa lasa izy namelona ny moto-ny ihany. Nivoaka avy hatrany ny tompon’ilay kioska ka nanenjika azy ka tratrany ihany izy. Notazoniny ka tsy afa-nihetsika intsony ilay mpanao trafikana vola sandoka. Polisy niasa teo akaikin’ny HJRA teo no nanatona nijery ny zava-misy ka voamarina fa vola sandoka tokoa ilay vola tany amin’ity lehilahy ity.Nahitana odigasy tao anaty moto…Niroso tamin’ny fisavana ity lehilahy ity avy hatrany ny polisy ka nahitana odigasy marobe tao anatin’ny moto nentiny, niaraka amin’ny “cartouche” 9 mm iray sy vola sandoka 5 000 Ar iray. Nosamborina izy ka nentina nihazo avy hatrany ny kaomisaria foibe eny Tsaralalàna hanohizana ny fanadihadiana rehetra. Ny polisin’ny Sut no mandray an-tanana ny fanadihadiana rehetra. Lasibatra hatrany ireny “cash point” ireny tato ho ato, raha tsy tafihin’ny jiolahy dia iharan’ny fanapariahana vola sandoka. Tsy kely lalana ny mpanao ratsy, koa aoka ho mailo hatrany manoloana ny asan-jiolahy sesilahy tato ho ato izay.Jean ClaudeL’article Narotsany tamina “cash point” iray: lehilahy iray nahatrarana vola sandoka 200 000 Ar sy odigasy a été récupéré chez Newsmada.